Ugaas caan ahaa oo lagu dilay Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ugaas caan ahaa oo lagu dilay Kismaayo
A warsame 25 March 2014 4 April 2019
Kismaayo – Mareeg.com: Labo nin oo watay bastooladu ayaa shalay galab Kismaayo ku dilay ugaas can ka ahaa halkaas, kaasoo la oranjiray Ugaas Maxamed Xuseen Hafoow.
Ugaaskaan ayaa lagu dilay bartamaha suuqa Dallacaadda ee xaafadda Calanley, ee magaalada Kismaayo.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee maamulka kumeel-gaarka ah ee Jubba Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in ay ciidamada maamulka soo qabteen labo nin oo ku eedeysan dilka ugaaska, kuwaas oo baaritaan lagu sameyn doono, haddii dambi lagu helana sharciga la hor geyn doono.
Ugaasku wuxuu ahaa nin caan ka ahaa magalaada Kismaanyo. Lamana oga sababta ka dambeysa dilka ugaaska. Meydka ugaaska ayaa saaka lagu aasayaa Kismaayo.
Double-edged offensive in Somalia increases Shebab threat in East Africa